हिन्दु धर्म अनुसार मंगलवार, यस्तो काम गर्नुहोस् तपाईंको भाग्य चम्कनेछ ! – Khabar Patrika Np
हिन्दु धर्म अनुसार मंगलवार, यस्तो काम गर्नुहोस् तपाईंको भाग्य चम्कनेछ !
प्रकाशित मिति: मंगलबार, बैशाख ०७, २०७८ समय: ९:५९:१३
यो पनि :एजेन्सी । हरेक व्यक्तिको स्वभाव र व्यवहार फर फरक हुने गर्दछ। ज्योतिषशास्त्रका अनुसार राशि र जन्म महिनाबाट पनि मानिसको स्वभारका बारेमा धेरै कुरा थाहा पाउन सकिन्छ। जन्म महिनाको हिसाबबाट तपाई कुनै व्यक्तिको लक्की नम्बर, लक्की कलर, राम्रो नराम्रो कुराका बारेमा पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ। आज हामी तपाईलाई तीन फरक महिनामा जन्मने व्यक्तिका बारेमा जानकारी दिदैछौँ। यी राशि हुने व्यक्ति रोमान्टिक र प्रेमको मामिलामा निकै राम्रा हुने गर्दछन्।
अगस्टमा जन्मने व्यक्ति=अगस्टमा जन्मने व्यक्ति पैसाको मामिलामा कन्जूस हुने गर्दछन्। कम खर्च गर्न मन पराउने गर्दछन्। यस महिनामा जन्मने व्यकित पैसाको निकै महत्व दिने गर्दछन्। जब यिनीहरुको साथमा पैसा आउन थाल्यो भने परिवार र पार्टनर बेकारको लाग्न थाल्दछ। तर यिनीहरु कुरा बुझने खाले हुन्छन्।यो महिनामा जन्मने व्यक्ति दूरदर्शी हुने गर्दछन् र पर्सनालिटीको मामिलामा अगाडि हुन्छन्। यिनीहरु आफ्नो काम र भविष्यलाई लिएर निकै गम्भिर हुने गर्दछन्। अगस्टमा जन्मिने व्यक्ति प्रेममा चाडै पर्ने गर्दछन्। तर प्राय यिनीहरुलाई धोका हुने गर्दछ।